PSG: Choupo-Moting waxay rabtaa inay joogaan - Dhaqanka - Teles RELAY
ACCUEIL » SPORTS PSG: Choupo-Moting waxay dooneysaa inay joogaan - Culturebene
Doha ee Qadar toddobaadkii, Choupo-Moting wuxuu diyaariyaa CAN Egypt 2019 oo leh libaaxyo aan la dabooli karin. Weeraryahanka PSG ayaa waxaa ku dhawaaqay dhowr warbaahin oo ku saabsan ka tagistiisa, xitaa xitaa waxay u direysaa Shiinaha fure u ah mushaarka wanaagsan. Captain of lions Indoniable ayaa ugu baaqaya macluumaadkan "wax kasta".
Ciyaaryahankii hore ee Schalke 04 ayaa doonaya inuu sii wato xiisaha Paris. "Raadiyayaashu waxay niyadjabayaan inay u baxaan 5M €? Maxaa? Waa imisa? Waxay noqon kartaa run, ma aqaan, laakiin aniga ahaan waxaan joogaa Paris. Ilaa iyo iminka, cidna kama soo jeedin kooxda inay igu fiicnaan laheyd hadii aan baxo. Si kastaba ha ahaatee, kooxna ma i soo wacday ... Anigu waxaan maqalnay warar sheegaya in iigu soo dirtay Shiinaha, laakiin waa wax aan micno lahayn. Ma doonayo inaan halkaas tago, "ayuu yiri.
Iyadoo imaanshaheeda Leonardo uu yahay agaasimaha isboortiga, waxyaabo ayaa isbedeli kara xiddiga reer Cameroon.
Kooxda ayaa Axaddii u diyaargarowday inay u soo baxdo PSG ka dib markii ay yimaadeen Leonardo. Sidoo kale, sida laga soo xigtay Daily Mail, Julian Draxler iyo Eric Maxim Choupo-Moting ayay u badan tahay inay weli joogaan dib u bilaabashada, labada nin ayaa sheegay inay doonayaan inay sii joogaan kooxda.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore http://www.culturebene.com/51964-psg-choupo-moting-veut-rester.html
Xiddigii hore ee UEFA Michel Platini oo xabsiga u taxaabay musuqmaasuqa musuq-maasuqa - Culturebene